Taratasy Misokatra Ho An’ny Filoha Obama Avy Tamin’ny Bahraini Mpiaro Ny Zon’olombelona · Global Voices teny Malagasy
Taratasy Misokatra Ho An'ny Filoha Obama Avy Tamin'ny Bahraini Mpiaro Ny Zon'olombelona
Voadika ny 22 Mey 2015 12:36 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, English
Mpanao hetsi-panoherana tao Manama, Bahrein, 2011. Sary avy tamin'ny Bahraini mpikatroka mafana fo, tamin'ny Wikimedia (CC BY-SA 3.0)
Fantatra amin'ny fananana harena midadasika amin'ny solika, ary indrindra indrindra, ny fanitsakitsahany ireo zon'olombelona sy ny tsy fahalalahan'ny fivavahana, ny Fanjakana Bahrain. Firenena misy mponina 1.3 tapitrisa monja, naman'i Etazonia hatry ny ela i Bahrain, izay nametraka toeram-pamaharana miaramila teo amin'ny nosy hatramin'ny taona 1947.
Tamin'ny fihetsiketseham-bahoaka nalaza be ny taona 2011, nitaky ny fandraisana andraikitra bebe kokoa ary fanarahana ireo fenitra momba ny zon'olombelona nifanarahan'ny rehetra, tamin'ny governemanta ireo Bahrainis. Hatreo, maro ireo niresaka ny fanavakavahana hatrany ary fanilikilihana ireo Silamo Siita ataon'ny fitondràna. Raha Silamo Chiites ny ankamaroan'ireo Bahrainis, ny fianakaviana Al-Khalifa eo amin'ny fitondràna ankehitriny kosa Sionita. Nandritra ireo hetsi-panoherana, nanoratra tao amin'ny gazetiboky Foreign Policy i Marc Lynch hoe “tsy vitan'ny namaly [ireo hetsi-panoherana] tamin'ny herisetra mahery vaika fotsiny ny fitondràna Bahraini, fa ihany koa, nandrisika ny hisian'ny fitokotokoana mahatsiravina mba hanasamahany ny hetsiky ny vahoaka sy hanorenana mafy ny fanohanana nasiônaly sy avy amin'ny faritra ho an'ny fampiasàna hery famoretana.”
Nampitombo ny lazany ho iray amin'ireo mpanao hery famoretana faran'izay mafy indrindrany fandraisam-pitenenana resaka politika amin'ny Aterineto ny fitondràna. Mpanao gazety maro, mpitoraka bilaogy, mpaka sary, ary mpikatroka mafana fo nomerika no nosamborina ary nampidirina am-ponja tamin'ny ezak'izy ireo hitondra fahazavana momba ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ary ny fanindraindran'izy ireo ny fiarovana azy ireny. Isan'izy ireny ny mpikambana roa ato amin'ny vondrom-piarahamoninay, Ali Abdulemam sy Mohamed Hassan, samy nofonjaina izy roa ireo noho ny asan'izy ireo ary ankehitriny miaina an-tsesitany. Ny Febroary lasa teo, nolavin'i Bahrain ny zom-pirenena ho an’ireo olom-pirenen'i Bahrain miisa 72 (ao anatin'izany i Abdulemam), mpanao gazety na mpitoraka bilaogy ny ankamaroan'izy ireo.
Androany ny Filohan'ny Etazonia Barack Obama dia hihaona amin'ny zanaka lahin'ny mpanjakan'i Bahrein, Salman bin Hamad bin Isa al-Khalifa, izay ny fianakaviany no nitondra teo amin'ilay nosy firenena hatramin'ny taonjato faha 18.
Ao anatin'ny taratasy etsy ambany, mangataka ny Filoha Obama i Sayed Yousif AlMahafdah, mba “ho feon'ny vahoakan'i Bahrain” ary hanipika ny maha zava-dehibe ny fiarovana ny zon'olombelona ho an'ny Bahrainis rehetra amin'io fihaonana io. Filoha lefitry ny Ivon-toerana ho an'ny Zon'olombelona Bahrain i AlMahafdah, fikambanana tsy mikatsaka tombontsoa hita any Bahrain sy any Danemark. Any Berlin i AlMahafdah, izay nahavoatery azy hiaina any an-tsesitany nanomboka ny volana Oktobra 2013, taorian'ny nahalasa azy ho kinendrin'ireo fisamborana tsy ara-drariny sy fampijaliana noho ny asany momba ny zon'olombelona any Bahrain.
Ry Filoha Obama hajaina,
Martin Luther King no nampifandrohy ny ady ho an'ny fahalalahana, fitoviana, ary ny rariny ho an'ireo Afrikàna-Amerikàna tamin'ny tolon'ny vahoaka eran-tany: “rahona mitatao ho an'ny rariny maneran-tany ny tsy rariny any rehetra any.” Androany manoratra ho anao aho momba ny tolon'ny vahoakako any Bahrain.
Any Bahrein, am-polo taonany maro izahay no nijaly tamin'ny tsy rariny sy tsy fitoviana, ary fotoana ela mihitsy aza no nitolona ho an'ny zonay. Mikendry sy manafoana ireo feo rehetra izay maneho fanoherana kely amin'ireo fanitsakitsahana maro ataon'izy ireo amin'ny vahoakany ny fianakaviana mpanjaka Al Khalifa sy ny governemantany.
Nifantoka hatrany ary nikendry foana ireo Silamo Siita ireo manampahefana eo amin'ny governemanta. Nandrava Maoske Siita miisa 38 ny governemanta ny taona 2011, mamela ireo fandraisam-pitenenana feno fankahalàna ny Siita handeha amin'ny media anefa tsy voaara-maso izy ireo, nandefa am-ponja Siita an'arivony, ary manohy mampiasa hery tafahoatra amin'ireo Siita mpanao hetsi-panoherana. Tsy mahazo miditra ho miaramila ny Siita, na hoe hanana toerana manan-danja ao amin'ny governemanta. Atao ho olom-pirenena any amin'ny kilasy faharoa izahay.
Tsy misy maha samihafa ny tolona sy nu fijalian'ireo vahoakan'i Bahrain amin'ny tolon'ireo Afrikàna-Amerikana teo ambanin'ny vanim-potoanan'ny lalàna Jim Crow, na ny tolon'ireo Afrikàna Tatsimo mainty hoditra tamin'ny fanavakavahana ny fotsy sy ny mainty.
Mamelà ahy ianao hilaza ny tantaran'ireo namako any amin'ny Fonjan'i Jaw, fonja lehibe indrindra ho an'ireo lehilahy voafonja mandritra ny taona ela any Bahrein, izay fitaratry ny fanilikilihana ny Siita aty ivelan'ireo rindrin'ny fonja ny fomba fitondràna ireo voafonja ao.
Ny 10 Martsa tao Jaw, ireo Siita lehilahy sy ankizy an-jatony dia niharan'ny fidarohana faobe, fampijaliana, ary hanoanana. Mampiasa finday antsokosoko ireo voafonja mba handefasana ny sarin'ireo fampijaliana azy any amin'ny media sosialy. Midaroka ireo Siita voafonja ary manadrohadro ny antokom-pinoana misy azy ireo mpiambina. Tsy avelan'ireo mpiambina maneho ny finoany ary manao ny fivavahany izy ireo. H erinandro maromaro ny sasany amin'ireo fanakaviana no tsy mandre ny momba ireo havany voafonja.
Ho fanampin'izany, manenjika ireo rehetra izay mahasahy mitatitra ireo heloka ireo ry zareo manampahefana. Vao haingana izao, nosamborin'izy ireo ny mpiara-miasa amiko, malaza mpiaro ny zon'olombelona, Nabeel Rajab. Mety hahazo sazy an-tranomaizina mandritra ny 10 taona izy, noho ny nandefasany bitsika momba ireny sy ireo fanitsakitsahana hafa ihany koa ny zon'olombelona. Mbola mitohy ny fampijaliana sy fanararaotana amin'izao anoratako izao. Indrisy, toa tsy misy olona afaka hampitsahatra io na miraharaha akory.
Na dia eo aza io fanilikilihana io, mikendry ny hahatratra ny fitoviana izahay, ny fahalalahana, ary ny demôkrasia, izay mendrika anay, mitovy amin'ireo olona hafa. Mino ireo tenin'i Martin Luther King izahay, “manomboka mifarana ny fiainantsika amin'ny andro hahanginantsika amin'ireo zavatra tena manahirana.” Mba handraisana ireo tenin'i Dr. King ho an'i Bahrain: “Ny fahafahana no tanjonay, Mino [izahay] fa hahatratra izany izahay, satria na dia lavitra an'io aza izany, ny fahalalahana no tanjon'i [Bahrain].”
Manainga anao izahay handeha amin'ireo làlana nizoran'i Martin Luther King, ilay Amerikana tompondakan'ny zo, ary hanohana ny tolonay. Meteza ho feon'ireo vahoakan'i Bahrain rehefa mihaona amin'ny zanaka lahin'ny mpanjakanay ianao.
Sayed Yousif AlMahafdah
Mpiaro ny zon'olombelona ary gadra politika teo aloha tany Bahrain
Filoha Lefitry ny Ivon-toerana Bahrain ho an'ny Zon'olombelona
Firesahana ny Zon'Olombelona any Bahrein ato Amin'ny Global Voices [Ang.]
Fitokonana Tsy Mihinan-kanin'ny Mpiaro ny Zon'olombelona, Manohitra ny Fampijaliana Ao Amin'ny Fonja Mahatsiravin'i Bahraini – 12 May 2015
Bahrainis mpiaro ny Zon'olombelona, Nabeel Rajab, Nosamborina Indray Noho Ny Fandefasana Bitsika – 2 Aprily 2015
Mpitarika ny Mpiaro ny Zon'olombelona ao Bahrain, Nabeel Rajab, Mety Hofonjaina Noho Ny Bitsika ISIS – 14 Martsa 2015
Ali Abdulemam: ‘Tsy Nanary Ny Maha Izaho Ahy Aho. Bahraini Aho.’ – 20 Febroary 2015
Hamongotra Ireo Hetsi-panoherana Malaza i Bahrein, Fa Tsy Ny Fanohanana ny ISIS – 21 Novambra 2014
Fonja any Bahrain: Anganon'ny Fampijaliana – 11 Novambra 2014
Endrika GV: Tao anatin'ny resaka nifanaovana tamin'ny Mpikatroka Mafana Fo Tsy Tian'i Bahrain Horesahantsika – 21 Oktobra 2014
Mpikatroka Mafana Fo Miaro ny Zon'olombelona Malaza Be ao Bahrain, Nosamborina Noho ny Fitsikeràny Ireo Mpitandro Filaminana Nisintaka Nanjohy ny ISIS – 1 Oktobra 2014
Silamo Siita ao Bahrain Nolazaina Ho Mpanao Politika Ary Mpitory Teny Nanao Fanekena Tamin'ny ISIS – 24 Jolay 2014
Nahoana ny Mpanohitra Lehibe Indrindra Any Bahrain No Maniry Ny HanananIreo Vahoaka Zanaka Maro – 22 Aogositra 2014
SARY: Siita Misaona Ireo Voatoraka Entona Mandatsa-dranomaso Tany Bahrain – 4 Novambra 2013
Ireo Tatitra sy Fikarohana Avy Amin'ireo Fikambanana Mpiara-miasa
Tatitra Vaovao Amin'ny Fanilikilihana ny Siita any Bahrain: Voahilikilika Ao amin'ny Taniny – Bahrain Centre for Human Rights
Filazana Ny Fisarantsarahan Ho Heloka Bevava, Fanamafisana ny Tsimatimanota – Human Rights Watch
Bahrain: Filazàna ny Fisian'ny Fanitsakitsahana Tafahoatra ny Voafonja – Human Rights Watch
‘Fabrigate’: Ahoana ny Fomba Hanohizan'ireo Media Fehezin'ny Fanjakàna ny Fandrakofany vaovao ‘Ferena’ Amin'ny Alalan'ireo Tatitra Foronina – Bahrain Watch
Nitsikilo ireo Mpanao Lalàna sy ireo Mpikatroka Tamin'ny Spyware an'ny Anglisy ny Governemanta ao Bahrain – Bahrain Watch